Maxay tahay inaan fiirogareyno isboortiga?
Waqtiga: 2019-11-12 Hits: 202
Kahor bilowga jimicsiga, waxay u baahan yihiin inay sameeyaan baaritaan jireed oo dhameystiran. Waxyaabaha ay ka kooban tahay baarista waxaa ka mid ah: dhiig karka, xaydhka dhiigga, hemoglobin glycosylated, shaqada wadnaha, shaqada dareemayaasha, shaqada kelyaha, caafimaadka wadnaha iyo cagaha iwm. Dhakhtarka ayaa kuu diyaarin doona jimicsi jimicsi macquul ah iyadoo loo eegayo xaaladaada jirka.
Xiro dhar ku habboon, kabo iyo sharaabaadyo. Waa inay xidhaan dharka neefsashada leh xilliga qaboobaha, kaasoo jirka ka caawiya dhididka iyo ka hortagga hergabka. Markay hawadu aad u qabow tahay, laguma talinayo inay ku ciyaaraan bannaanka. Xiro kabo kala duwan si aad u sameysid isboorti kaladuwan, sida xirista kabaha dheesha markii aad qoob-ka-ciyareyso, xiro kabo orod goos goos ah, gasho kabaha orodka markaad fuusho, iyo wixii la mid ah. Marka kabaha aysan ku habboonayn ama aysan dareemaynin raaxo la'aan, waa in si dhakhso ah loo beddelaa. Sharaabaadyo waa in loo doortaa midab khafiif (cad) oo dhidid wanaagsan. Jimicsi kadib, hubi cagahaaga haddii ay leeyihiin ifafaale casaan, barar, kuleyl iyo xanuun. haddii ay sidaas tahay, waa in lala macaamilaa waqtigooda.
Waa inay xoojiyaan la socodka sonkorta dhiigga ka hor iyo ka dib jimicsiga. Goorma ayaa la sameeyaa jimicsi xad-dhaaf ah ama jimicsi xoog leh, bukaanku waa inay si ku meel gaar ah ula qabsadaan barnaamijka cuntada iyo daaweynta daweynta, si looga fogaado hypoglycemia.
Ka ilaali hypoglycemia. Inta lagu jiro jimicsiga, muruqyadu waxay cunayaan gulukoosta jirka. Isla mar ahaantaana, dareenka insulinta ayaa kobcin doona. Kaalinta laba-labo waxay horseedi doontaa yareynta gulukoosta dhiigga ka dib jimicsiga. Dhiig yaraanta "hypoglycemia" waxay ku dhici kartaa 2 ~ 12 saacadood dhaqdhaqaaqa ka dib, xitaa 24 saacadood gudahood. Markay sare u kacdo jimicsiga, muddada dheer; Markasta oo ay dhacdo in uu yaraado hypoglycemia, the
Goorta la bilaabayo jimicsi iyo intee in le'eg. Waxaan kugula talineynaa sonkorowgu inuu jimicsi sameeyo 1 saac kadib cuntada oo uu ka fogaado saameynta ugu sarreysa ee daroogada. Haddii aad rabto inaad jimicsi sameyso, waxaad u baahan tahay inaad yareyso qiyaasta daawada. Muddada jimicsiga, jimicsiga jimicsiga jimicsiga hawada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30 daqiiqo wakhti kasta, waqtiga jimicsiga wuxuu gaarayaa ugu yaraan 150 daqiiqo usbuucii. Tababbarku wuxuu qaadanayaa 10 ~ 15 daqiiqadood waqti kasta, ugu yaraan 3 jeer usbuucii; Jimicsiga dabacsanaan waa inuu qaataa 5 minutes 10 daqiiqadood waqti kasta.
Bogga Hore: Toban Sababood ee Ugu Caamsan ee Loogu Talagaley Heerka Gulukoosta Dhiigga
Bogga Dambe: Maxaa la cunaa haddii ay ku dhacdo hypoglycemia?